विज्ञान प्रविधि – Page 20 – News Of Nepal
काठमाडौं, १९ पुस - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर प्रयोगमा ल्याउने बारे अध्ययन सुरु गरेको छ। विद्युत् वितरण र भुक्तानीलाई स्वचालन प्रणाली(अटोमेशन)मा लाने सोचअनुसार प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर प्रयोगमा ल्याउनेबारे अनौपचारिक रूपमा अध्ययन सुरु गरेको हो।यसका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय..
आइतवार, पुस १७, २०७३ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १७ पुस - नेपाल टेलिकमले आइतबार सार्वजनिक गरेको चौथो पुस्ता प्रविधि (फोर जी) सेवा आइफोन ६, ७ बाहेक सबैले उपयोग गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता सोभन अधिकारीले आइफोन सिरिज ६,७ फोनमा फोर जी नचल्ने बताए। त्यसबाहेक एन्ड्रोइड फोनमा फोर जी सेवा सुचारु गर्न सकिने जानकारी दिए। ‘एप्पल..
काठमाडौं, १६ पुस - टेलिकमले आइतबारदेखि काठमाडौं र पोखरामा चौथो पुस्ता (फोरजी) सेवा सुरु गर्ने भएको छ । टेलिकमले पुस १७ गतेदेखि काठमाडौं र पोखरामा फोरजी सेवा सुरु गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएको थियो । पहिलो चरणमा काठमाडौं र पोखराका तीन लाख ग्राहकले फोरजी सेवा प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।..
काठमाडौँ, १४ पुस - अहिलेसम्म एप्पलले एउटा मात्र सिमकार्ड लाग्ने आइफोन बनाउँदै आएको छ । यसले उपभोक्ताहरुको आइफोनसँग गुनासो बढिरहेको छ । उपभोक्ताको गुनासोलाई ध्यान दिँदै एप्पलले डुअल सिमवाला आइफोन ल्याउने तयारीमा रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । फोब्र्स पत्रिकाले आफ्नो एक रिपोर्टमा अमेरिका तथा..
पत्याउनु हुन्छ ? खरको छानोलाई आगोले छुँदैन !
काठमाडौँ, ९ पुस - खरको छानोमा मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाउँदा के होला ? त्यो घर केही क्षणमै खरानी हुन्छ तर आगो लागेन भने के भन्ने ? तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो कुनै जादु हो । यो जादु होइन, नेपाली वैज्ञानिकले आगो नलाग्ने प्रविधि विकास गरिसकेका छन् । नेपाल विज्ञान प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति प्राडा जीवराज..
आफ्नै स्याटलाइट स्थापनाको तयारीमा नेपाल
काठमाडौँ, ७ पुस - अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाको सम्भावना बढेको छ । करिब ३५ वर्ष अघिदेखिको प्रयास साकार हुने देखिएको छ । स्याटलाइट स्थापनाका लागि विश्वका ख्यातिप्राप्त कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेकाले यो काम अगाडि बढ्ने भएको हो । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट नहुँदा सरकारी सूचनाको..
मङ्लबार, पुस ५, २०७३ मा प्रकाशित
बागलुङ, ५ पुस - इन्टरनेटको दुनियामा स्काइपलाई भिडियो कलिङको बादशाह मानिन्छ। नीजि देखि व्यवसायीक कलको लागि यो एप लोकप्रिय छ। पछिल्ला २/३ बर्षमा व्हाट्स एपले आफ्नो जवर्जस्त बजार विस्तार गरिरहेको छ। भिडियो कलको सुविधा दिने एपबीच तिब्र प्रतिश्पर्धा भइरहँदा नयाँ नयाँ फिचर उनीहरुले दिन थालेका छन्।..
मुस्ताङ, २ पुस - मुस्ताङको कागबेनीमा परीक्षणको रुपमा एक मेगावाट क्षमताको वायु ऊर्जा प्रणाली जडान हुने भएको छ । नेपालको ‘एभरेष्ट बिन इनर्जी’ प्राली र दक्षिण अफ्रिकाको ‘एभरेडी क्यास्ट्रोल इनर्जी’को सहकार्यमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको साझेदारीमा वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न लागिएको हो..
काठमाडौं,२९ मंसिर - के फोन नम्बर परिवर्तन नगरी चाहेको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको सेवा लिन सकिएला ? अबको केही समयभित्र नै फोन नम्बर परिवर्तन नगरी सेवा प्रदायक परिवर्तन सम्भव हुनेभएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भन्छ, ‘अबको तीन महिनाभित्र जसरी भए पनि यो प्रविधि लागू गर्छौँ । ’ नेपाल दूर सञ्चार..
यसरी पाउनुस् स्मार्टफोनको लतबाट छुटकारा
काठमाडौं,२९ मंसिर - यदि तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनमा घण्टौं बिताउनुहुन्छ भने यसको अर्थ हुन्छ की तपाईंमा स्मार्टफोनको लत लागेको छ । बारम्बार फोन नहेरी बस्नै सक्नुहुन्न भने अब तपाईं सम्हालिने बेला आइसकेको छ किनकी स्मार्टफोनको लतले ठूलो नकारात्मक असर पार्नसक्छ । तर यदि तपाईंले केही स-साना कुराहरुमा ध्यान..